နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper APK ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » တိုက်ရိုက်နောက်ခံများ » နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper
နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper APK ကို
သငျသညျအပွင့်ကိုချစ်လျှင်, ငါတို့သည်တစ်ခုရှိ ထူးဆန်းသော သင်တို့အဘို့အအံ့သြစရာ, နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper! ဤသည်အံ့သြဖွယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပန်းပွင့် wallpaper ကိုသင်တို့အဘို့စုံလင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်! ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချကျနော်တို့သေချာသင့်ရဲ့ Android device ကိုလိမ့်မည်ကြောင်းလုပ် အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှု သင်တို့သည်ငါတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနီယွန်ဝေါလ်ပေပါကိုအသုံးပြုဖို့ပါလျှင် အခမဲ့!
ဤသည်နီယွန်ပန်းပွင့် Theme ကိုလုံးဝသငျသညျကို Android စိတ်ကြိုက် apps များကိုကြည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်! စံနောက်ခံပုံများအကြောင်းကိုမေ့လျော့နှင့်သင့်စမတ်ဖုန်းကိုအကောင်းဆုံးပန်းပွင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါတွေထဲကရ! နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper ယခု Download!
နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper သငျသညျလိုလျှင်သည်ကြီး တောက်ပတဲ့အရောင်နောက်ခံပုံများ! ဒီအခမဲ့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ Android device ကိုသစ်တစ်ခုကြည့်ပေးပါ ဝေါလ်ပေပါယခုအသက်ရှင်နေထိုင်။ ယင်းကိုကြည့်ပါ HD ကို screenshots များ ဒီအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကြည့်ရှုမည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့!
•နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper Download နှင့်တပ်ဆင်ရန် app ကိုစောင့်ဆိုင်း;
•app ကိုဖွင့်ပါ နှင့်အသစ်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါကို HD ကိုစိတ်တိုင်းကျစတင်;
•ကို Select လုပ်ပါ "Set Active ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ" နှင့် installation ကိုပြည့်စုံပါ!
တစ်ဦးကဖုန်းကိုရောင်စုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများလုံးဝနိုင် သင်အသုံးပြုလမ်းကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်အပြန်အလှန် သင်၏ဖုန်းနှင့်အတူ! သင်ရုံသင့်ရဲ့ device ကိုအလှဆင်ထက်ပိုလုပျနိုငျ! အဆိုပါနီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper သင်အံ့သြဖွယ် personalization features တွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဝေါလ်ပေပါကိုစိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်!
- နောက်ခံပုံပြောင်းနည်း! သင်က app ကိုဖွင့် menu ကနေနောက်ခံပုံများတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အမျိုးအစားကောက်နိုငျပါသညျ! သငျသညျတစ်ချိန်ကဝေါလ်ပေပါကို download လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ ထိုနောက်မှသင်ကမည်သည့်အချိန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်!
- စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ် မတူညီသော ဒြပ်စင်များနှင့်အရောင်များ!
- အဆိုပါအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကိုရွေးချယ်ပါ! သငျသညျမျက်နှာပြင်ကိုထိတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတောက်ပအရောင်နောက်ခံပုံများဓာတ်ပြုရာအတွင်းလမ်း Pick!
- HD ကိုဂရပ်ဖစ်များနှင့်အံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်း! ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကသင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုစိတ်ကြိုက် apps များဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ယနေ့အံ့သြဖွယ်နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper စမ်းကြည့်ပါ! သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ဝေါလ်ပေပါအရောင်များကိုခံစား Start!
- မည်သည့် Android ဗားရှင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်သောနောက်ဆုံးပေါ်အသစ်သို့တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်။ နီယွန်ပန်းတိုက်ရိုက် Wallpaper Download ယခုနှင့်သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပေါ်ဤအကြောင်းအံ့သြဖွယ် features တွေစမ်းသပ် start!
Bugfix, အမြန်နှုန်းတိုးတက်အောင်အသစ် features တွေထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
9.06 ကို MB
Photosphere HD ကို ...